ဘုရားမြွေ ဆိုတာ တကယ် ရှိသလား? ဘုရားပေါ် မှာ မြွေတွေ ထားသင့် သလား? – Shwe Sar
ဘုရားမြွေ ဆိုတာ တကယ် ရှိသလား? ဘုရားပေါ် မှာ မြွေတွေ ထားသင့် သလား?
By Shwe SarPosted on October 10, 2020
အခုpostက ဆန့်ကျင့်ရေးpost ပါ အကုန်လုံးဝိုင်းပြီး ပါဝင်ကြဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ဘာကို ဆန့်ကျင်မလဲဆိုရင် မြွေတွေကို ဘုရားမြွေတွေလုပ်နေတဲ့ အချက်ကို လုံးဝဆန့်ကျင့်ပါတယ်။ ဘု ရားေ မြွ အလုပ်ခံရဆုံး မြွေတွေက Burmese python နဲ့ Reticulated python တွေများပါတယ်။ မြန်မာအခေါ်အဝေါ်ဆိုရင်တော့ စပါးအုံးနဲ့စပါးကြီးပါ။ ဒီကောင်တွေက အဆိ ပ် လုံး ဝ မရှိပါဘူး ကိုယ်လုံးနဲ့သာ ညှစ်ပြီး သားကောင်တွေကို မြိုကြတဲ့မြွေတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Burmese python ဆိုရင် ကမ္ဘာမှာ တတိ ယအကြီးဆုံးမြွေလဲဖြစ်ပါတယ်။ မြွေတွေ ဘာလို့လူတွေနေတဲ့ နေရာတွေမှာ တွေ့လာကြတာလဲ? ဒါကမြွေတွေရဲ့ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး လူတွေရဲ့ အပြစ် သာ ဖြစ်ပါတယ် လူတွေက သူတို့ရဲ့အိ မ်တွေကို ကျူးကျော်ပြီးအိမ်တွေ တိုက်တွေဆောက်လာတာတွေကြောင့် နေစရာမရှိလို့ လမ်းပေါ်တွေမှာ သွားလာနေကြတာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့တာကို အခုလိုဘဲ မြွေက သူ့ဟာသူ သွားတာကို ဖမ်းပြီး ဘုရားပို့မယ်ဆိုတာကြီးကိုတော့ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ ဖြစ်သင့်မဖြစ်သင့်။ အရင်က ဘုရားမြွေလုပ်တယ် ဆိုတာက ဘုရားပေါ်ြေ မွတ က် လာလို့ ဘုရားလာဖူးတယ်တွေ ဘာတွေပြောပြီး ဘုရားမြွေလုပ်ကြတယ်။ အခုက သူ့ဟာသူ တခြားနေရာက မြွေကို ဘုရားပို့ပြီး ဘုရာြးေ မွလုပ် မယ် ဆိုတာကြီးကဘြာ ကီး လဲ?ြ ဖ စ်သင့်လားမဖြစ်သင့်လားဆုံးဖြတ်ကြပါ။
အခုဖ မ်းပြီး ပို့မ ယ်ဆိုဆဲ့အကောင်က burmese python ဖြစ်ပါတယ်။ burmese python တွေက ငယ်တုန်းမှာ သစ်ပင်ပေါ်တွေ နေတတ်ကြပြီး နည်းနည်းကြီးရင်တော့ သစ်ပင်ပေါ် မှာေ နလို့ မရတော့လို့ မြေကြီးတွေပေါ်မှာ နေကြပါတယ်။ အရမ်းကြီးတဲ့အရွယ်ရောက်ရင်လဲ သွားလာရတာ အဆင်ပြေအောင် ရေထဲမှာ ပြောင်းရွှေ့နေတတ် ကြပါတယ်။ တကောင်တည်း နေ တ တ်ကြတဲ့ အကောင်တွေလဲ ဖြစ်ကြပါသေးတယ်။
အကုန်လုံး ဘုရားမြွေတွေကို မြင်ဖူးကြတယ်မလား မြွေတွေကို ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ အများအားဖြင့် မြွေတွေအကုန်လုံးက ငြိမ်နေကြတာကို မြင်ကြမှာပါ ဘာလို့ငြိမ်နေကြတယ်လို့ ထင်ကြလဲ ဘာလို့ငြိမ် တာလဲ တွေကောတွေးဖူးကြလား?
ပထမတစ်ချက်က သူတို့သဘာဝကို လုံးဝဆန့်ကျင်ပြီး ကျွေးမွေးတာတွေ ကြောင့်ပါဘဲ မြွေကအသားစားဖြစ်ပြီး ကျန်းမာဖို့အတွက် အဲ့တာတွေ စားဖို့လိုပါတယ်။ အခုဘုရားမြွေဆိုတဲ့ မြွေေ တွ ကို ကြည့်ကြည့်ဘာတွေကျွေးလဲဆိုရင် ကြက်ဥ နွားနို့ ပေါက်ပေါက်ဆုပ်တွေ ကျွေးနေကြတာပါ။ တချို့ကောင်တွေက ဘာမှမစားရလို့ ကြက်ဥတွေစားကြတယ် တချို့ကောင်တွေက မစားကြ လို့ဆိုပြီး ပါးစပ်ထဲ အတင်းထိုးထည့်ပြီး force feeding တွေ လုပ်ကြပါတယ်။
နောက် တစ်ချက်က မြွေတွေကို အကုန်စုပြီး ထားတာကြောင့်လဲဖြစ်ပါတယ် သူတို့သဘာဝက တစ်ကောင်တည်းတွေသာ နေတတ်ကြပြီး မိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ တွေ့ဆုံကြတဲ့ အကောင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုအကုန်စုပြီးထားတာကြောင့်လဲ မြွေတွေ stress ဝင်ကြပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကျ နေရာကျဉ်းကျဉ်းလေးနဲ့ ထားပြီး လူတွေဝိုင်းပြီး လိုက်ကြည့်နေတာတွေကြောင့်လဲ ကြောက်ပြီးs tress တွေဝင်ကြပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က တစ်ချို့နေရာတွေမှာဆို မြွေတွေကို ဘိန်းထိုးတာ ဆေးထိုးတာတွေလုပ်ပြီး ငြိမ်အောင် လုပ်ကြလေ့ရှိတယ်လို့လဲ ကြားဖူးပါတယ်။ အသားမစားရဘဲ ကြက်ဥတွေ နွားနို့တွေ အတင်းကျွေးတာတွေကြောင့် ဘုရားမြွေတွေ အကုန်လုံး ကျန်းမာရေးတွေ မကောင်းကြပါဘူး။
ဘုရားမြွေ လုပ်နေခြင်းက animal abuse ပါဘဲ မြွေတွေကို နိုပ်စက်ပြီး ပြစားပိုက်ဆံရှာနေကြတဲ့ အရာကြီးဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုတွေလုပ်နေခြင်းကို ကျွန်တော်တို့က စပြီးဆန့်ကျင်ပါတယ် ရပ်ေ ပးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ် အကုန်လုံးဘဲ ပူးပေါင်း ပါဝင်လာကြဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ မြွေတွေကိုဖမ်းမိရင် တောထဲကိုဘဲ သွားလွှတ်ပေးကြပါ မနိုပ်စက်ကြပါနဲ့။
Responsible animal keeping
Previous post အ လွဲကြီး လွဲနေ တဲ့ Q ပေါ်လစီ နဲ့ မြန်မာ့ကိုဗစ် တိုက်ဖျက်ရေး
Next post ချက်ပေါ်အင်္ကျီလေးကိုဝတ်ဆင်ပြီးကိုယ်လုံးလေးကိုလှုပ်ခါရမ်းကာဆက်ဆီကျလွန်းနေတဲ့ ဝါဆိုမိုးဦးရဲ့ အမိုက်စား Video လေး
ရေချိုးကန်လေးထဲက ရေစိုစို အလှတရား‌လေးတွေအပြည့် နဲ့ ပိုပိုရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
ဖြူဝင်းဥပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ရင်ခုန်သွားစေပြန်တဲ့ မေဂရေ့စ်